ကရင်ပြည်နယ်တွင် စီးပွားရေးကဏ္ဍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ယခင်ကထက် လေးဆခန့် တိုးတက်လာဟု ပြည်နယ် ဝန? - Yangon Media Group
”ကရင်ပြည်နယ်အနေနဲ့ စီး ပွားရေးတိုးတက်လာတယ်လို့ ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ စီးပွားရေးကဏ္ဍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအနေနဲ့ ယခင်ကထက် လေးဆခန့်တိုးတက်လာပြီး တစ် ဦးချင်းဝင်ငွေအနေနဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်က ငွေကျပ် ရှစ်သိန်းသုံး သောင်းခန့်သာရှိခဲ့ရာမှ ယခုအခါ ငွေကျပ် ဆယ့်တစ်သိန်းရှစ်သောင်း (၁၁၈ဝဝဝဝ)ခန့် တိုးတက်လာခဲ့ပြီ ပေါ့။ ဒေသရဲ့ ဆည်မြောင်းတာ တမံကိစ္စ၊ လက်လုပ်လက်စားဆင်း ရဲသားတွေအတွက် ချေးငွေကိစ္စ၊ သဘာဝတောတောင် သယံဇာတ ကိုမှီခိုပြီး ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိစ္စ၊5MW လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိမယ့်ဆိုလာ လျှပ်စစ်ဓာတ် အားပေးစက်ရုံ တစ်ရုံကို ပုဂ္ဂလိက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးကိစ္စ၊ ဘားအံမြို့ ကမ်းနားလမ်းစီမံကိန်း ဆောင်ရွက် ပြီးစီးမှုကိစ္စ၊ ရိုးရာဂျပ်ခုတ် လက်မှု ပညာသင်ဆရာ၊ ဆရာမ ၃ဝ ခန့် ထားပေးရေးကိစ္စ၊ အားကစား ကိစ္စနဲ့ နွေရာသီသောက်သုံးရေ ရှားပါးမှု ပြဿနာကို ရေတွင်းရေ ကန်တွေ တူးဖော်ပေးခြင်း၊ မြစ် ရေတင်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် ပေးခြင်းတို့နဲ့ ဖြေရှင်းကူညီပေး နိုင်ခဲ့တဲ့ကိစ္စ၊ မြစ်ရေတင်ကိစ္စ၊ မြေ ယာကိစ္စ၊ အမှုတွဲများ ဖြေရှင်းပေး ခဲ့မှုကိစ္စနဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါး ကာကွယ် ရေးကိစ္စတွေကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ မှာ ရာခိုင်နှုန်းပြည့် မဟုတ်တောင် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အောင် မြင်မှုတွေရှိလာခဲ့ပါတယ်”ဟု ကရင် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါ်နန်းခင် ထွေးမြင့်က ပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာသက်ကြီးရွယ်အိုများ အနေဖြင့် စိတ်ကျရောဂါ၊ သတိမေ့ရောဂါနှင့် အကြမ်းဖက်ခံရခြင်းများကိ??
သတ္တုမှုန့်များ တင်ဆောင်လာစဉ် တံတား ကျိုးကျသည့်ဖြစ်စဉ်မှ တရုတ်နိုင်ငံသား ယာဉ်မောင်းကို ပြည??